ဝေးထွက်, လူကို: 13.1ဘီလီယံနှစ်အရွယ်နဂါးငွေ့တန်းသေးသညျလူသားတို့အားဖြင့်မြင်ကြအများဆုံးဝေးသောဖြစ်ပါသည် - သတင်း Rule
ဝေးထွက်, လူကို: 13.1ဘီလီယံနှစ်အရွယ်နဂါးငွေ့တန်းသေးသညျလူသားတို့အားဖြင့်မြင်ကြအများဆုံးဝေးသောဖြစ်ပါသည်
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “ဝေးထွက်, လူကို: 13.1ဘီလီယံနှစ်အရွယ်နဂါးငွေ့တန်းသေးသညျလူသားတို့အားဖြင့်မြင်ကြအများဆုံးဝေးသောဖြစ်ပါသည်” နဂါးငွေ့တန်းထဲမှာအလန် Yuhas ကရေးသားခဲ့သည်, theguardian.com ကြာသပတေးနေ့ 7th, May အပေါ်များအတွက် 2015 19.22 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
ယေးလ်တက္ကသိုလ်နှင့်တက္ကသိုလ်ကယ်လီဖိုးနီးယား Santa Cruz မှနက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်သူတို့အကြောင်းကို 13.1bn လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းဖွဲ့စည်းတဲ့နဂါးငွေ့တန်းဖော်ထုတ်ခဲ့သောရူပနက္ခတ္တဗေဒဂျာနယ်ထဲမှာကြေညာခဲ့သည်, ထိုသို့ကြီးမားသောပေါက်ကွဲသံကြီးကတည်းကစကြဝဠာ၏ 13.8bn နှစ်သမိုင်းတွင်ထင်ရှားအစောဆုံးတိုင်းတာနဂါးငွေ့တန်းအောင်.
အဆိုပါအသစ်တိုင်းတာနဂါးငွေ့တန်း, အ unromantic စပြီး EGS-zs8-1 ပေးထား, ယခုအကွာအဝေးများအတွက်စံချိန်ရရှိထားသူ: စကြဝဠာမူရင်းဖြစ်တည်မှုဖြစ်ပေါ်စေသည်ကတည်းကချဲ့ထွင်ရန်ဆက်လက်ပြီ, အစောပိုင်းနဂါးငွေ့တန်း၏ထောင်စုနှစ်ကျော်ဝေးတဲ့နှင့်ဝေးကွာအပြင်ပြောင်းရွှေ့, နောက်ဆုံးမှာခန့်မှန်းခြေ 30bn အလင်းနှစ်ပေါင်းကွာကမ္ဘာမြေမှ zs8-1 EGS-ချပြီး.
ဒါပေမယ့်အလင်းသာ space ၏ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးအားဖြင့်ဒါအစာရှောင်သွားလာနိုငျသောကွောငျ့, နေရောင်မဟုတ်ဘဲကြောင့်ယခုအချိန်တွင်တူအဘယျအထက်မိနစ်အနည်းငယ်အကြာကသဏ္ဍန်အဘယျအများမျက်မှောက် - အဘယျသို့ကမ္ဘာမြေသို့ရောက်ရှိအမှန်တကယ်ဟောင်းအလင်းဖြစ်၏.
အလင်းလကြာပိတ်ထားရောင်ပြန်ဟပ် 1.3 စက္ကန့် ကမ္ဘာမြေရောက်ရန်, နေရောင်ခြည်ကြာ ရှစ်မိနစ် နှင့်တစ်ဦးဝေးကွာသောနဂါးငွေ့တန်းမှအလင်းနှစ်ပေါင်းဘီလျံကြာ. အဆိုပါအကျိုးသက်ရောက်မှု, အ Hubble တူအင်အားကြီးအဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းမှတဆင့်, eons အတိတ်သို့ကြည့်မျှော်သည်.
ဒါကြောင့်ဘာ EGS-zs8-1 ထဲမှာမြင်ရတဲ့အချိန်ကြာမြင့်စွာကလွန်ခဲ့တဲ့ဘာဖြစ်နေလဲ, ဝေးနေတဲ့နဂါးငွေ့တန်းထဲမှာ, အဝေးမှာ.
"ကျနော်တို့ကတကယ်တော့တဆင့်ပြန်ရှာနေ 95% ဒီနဂါးငွေ့တန်းမြင်ရဖို့အားလုံးကိုအချိန်ရဲ့,"Garth Illingworth, တစ်ဦးကယ်လီဖိုးနီးယား Santa Cruz တက္ကသိုလ်မှနက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်များနှင့်စက္ကူ Co-စာရေးဆရာ, သို့ပြောသည် အ Los Angeles Times. "ဒါဟာသူ့ရဲ့နို့စို့အရွယ်အတွက်တကယ်ကတော့ galaxy င်,"ဟုသူကဆက်ပြောသည်, "သောအခါဠာဟာသူ့ရဲ့နို့စို့အရွယ်၌ရှိ၏။ "
နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်ထိုရှေးဟောင်းတွေ့နိုင်ပါသည်, သူတို့က "လူငယ်" သောအခါအဖြစ်နှင့်တစ်ဦးအစောပိုင်း form မှာဝေးလံသောနဂါးငွေ့တန်း. EGS-zs8-1 သိအစောပိုင်းတို့တွင်မကြုံစဖူးကြီးမားတောက်ပတဲ့ဖြစ်ပါသည်, ဝေးလံတဲ့နဂါးငွေ့တန်း, နဂါးငွေ့တန်း၏ပြီးသားအကြောင်းတဆဌမအစုလိုက်အပြုံလိုက် - အကြောင်း 8bn suns - နှငျ့ဖန်တီးခြင်းကြယ်များ 80 ကျွန်ုပ်တို့၏နဂါးငွေ့တန်းထက်အဆပိုမြန်, သုတေသီတွေ့ရှိရ.
"ဒါကြောင့် 13bn လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းဖြစ်သကဲ့သို့ကျနော်တို့နဂါးငွေ့တန်းကိုမြင်လျှင်နေစဉ်, ဒါကြောင့်ပြီးသားထက်ပိုမိုတည်ဆောက်ခဲ့ 15% ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် Milky Way ၏ဒြပ်ထုသည်ယနေ့၏,"ယေးလ်သုတေသီ Pascal Oesch, စက္ကူ၏ခဲစာရေးဆရာမ, ကြေညာချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်. Oesch သုတေသနဠာ၏အစောဆုံးယုဂ်၏အချို့သောသရုပျဖျောကိုကူညီလိမ့်မယ်လို့အကြံပြု: "ဒီစကွဝဠာထို့နောက်ဆဲအလွန်ငယ်ရွယ်ခဲ့သည်။ "
"အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခု function ကိုအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောနဂါးငွေ့တန်းကြည့်ခြင်းအားဖြင့်, ငါတို့သည်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုပတ်ပတ်လည်ကိုမြင်သောအလေးလံသောဒြပ်စင်များ၏ buildup ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်နှင့်ငါတို့ရှိသမျှသည်ဖန်ဆင်းနေနိုင်,"Oesch ကပြောပါတယ်. သူက data တွေကိုကြယ်သောဤအစွန်းရောက်အကွာအဝေးမှာဖွဲ့စည်းခဲ့ကြသည်ဘယ်လို "ရန်အဖြစ်သဲလွန်စကိုပေး၏ကဆက်ပြောသည်, ထိုသူတို့သကွဲပြားခြားနားဒေသခံဝဠာကိုထက်ဖွဲ့စည်းခံရဖို့ထင်ရ. တိုင်းရှာဖွေတွေ့ရှိမှုမေးခွန်းတွေတစ်ခုလုံးအသစ် set ကိုဖွင့်။ "
Oesch နှင့် Illingworth နှစ်ဦးစလုံးဟာဘယ်တောင်ဝေးကွာအများအပြားပိုပြီးအလင်းရင်းမြစ်များနှင့်ဖွယ်ရှိနဂါးငွေ့တန်းကိုပြသပုံပေါ်ကြောင်းပြောပါတယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့သေး၎င်းတို့၏အကွာအဝေးကိုတိုင်းတာနိုင်သော. ပိုပြီးဝေးကွာသောနဂါးငွေ့တန်းအကြောင်းပိုမိုဒေတာနဲ့အတူ, သုတေသီများနဂါးငွေ့တန်းဖွဲ့စည်းခဲ့ပုံကိုသို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုရဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်, ဒါလျင်မြန်စွာ, ကြီးမားတဲ့ပေါက်ကွဲသံကြီးပြီးနောက်.
သိပ္ပံပညာရှင်များသည်အစဉ်အဆက်ကိုပိုမိုဝေးလံသောနှင့်အထက်နဂါးငွေ့တန်းရှာဖွေတွေ့ရှိရန်မကြာသေးမီနှစ်များတွင်ပွေးအလှားသှားရငျးပြီ, အစောပိုင်းဝဠာကိုမှသဲလွန်စ၏ဝိရောဓိလိုက်စားအတွက်. နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်ဘယ်လောက် starlight ပို်ကိုမြင်လျှင်အားဖြင့်အကွာအဝေးကိုတိုင်းတာဖို့ကြိုးစား, သို့မဟုတ် "redshifts", ဆငျးသကျမွငျ့မားသောစွမ်းအင်အလင်း၏ခရမ်းလွန်အဆင့်အနေဖြင့်မျက်စိမြင်နိုင်င်အရာကို, ပြီးတော့ဝေးတဲ့ချအနီအောက်ရောင်ခြည်အဆင့်ဆင့်မှ. စကြဝဠာတစ်ဦးအရှိန်မြှင့်ဗီဒီယိုကလစ်မှာချဲ့ထွင်အဖြစ်, အလင်းကိုကြာကြာလှိုင်းအလျားတစ်လျှောက်ဆဖြစ်လာသည် "redder".
ဒီနဂါးငွေ့တန်း၏အကွာအဝေးကိုတိုင်းတာရန်, ယေးလ်နဲ့ UC Santa Cruz အဖွဲ့ Mosfire လို့ခေါ်တဲ့ spectrograph အသုံးပြုတဲ့အထူးပြုတယ်လီစကုပ်ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထား - ကိုယ်တိုင်ကဟာဝိုင်ယီကျွန်းပေါ် Mauna Kea ၏မြုံမီးတောင်ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထား. နာဆာအသစ်တစ်ခုကိုစူပါတယ်လီစကုပ်ဖွင့်ဖို့စီစဉ်, ယာကုပ်ဝက်ဘ်ကအာကာသအဝေးကြည့်မှန်ပြောင်း, join ဖို့ အိုမင်း Hubble ကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းထဲမှာ, နှင့်လည်းထည့်သွင်းဖို့ တစ်ဦးအလွန်ကြီးမားသောသုံးဆယ်မီတာအဝေးကြည့်မှန်ပြောင်း ဟာဝိုင်ယီကျွန်းအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာရှုပ်ထွေးတဲ့မှ.
19089	0 အလန် Yuhas, အပိုဒ်, သတင်း, သိပ္ပံ, အာကာသ, အမေရိကန်သတင်း
← အန်းဒရွိုက်၏နောက်တစ်နေ့ဗားရှင်းဟာသူ့ရဲ့လမ်းအပေါ်ဖြစ်ပါသည်. သို့သော်ထိုသို့အဘယျသို့ဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်? Psephological pseudoscience →